Isivumelwano Sokubambisana Kwama-China Signs 137 Generation Road Cooperation ne-197 Country | RayHaber
IkhayaUMHLABAE-ASIA86 ChinaIsivumelwano Sokubambisana Kwama-China Signs 137 Generation Road Cooperation ne197 Country
17 / 11 / 2019 86 China, E-ASIA, UMHLABA, sesitimela, JIKELELE, HEADLINE
UGin usayine isivumelwano sokusebenzisana nezwe
Uhulumeni wase China uyaqhubeka nokukhulisa ukuhwebelana namazwe amukele iBelt Road Project. Abaphathi baseChina basayine isivumelwano sokusebenzisana se30 Generation Road nezwe le-137 enhlanganweni yezizwe i197 phakathi no-Okthoba. Ukuhwebelana kweChina neGenerations yamazwe phakathi kukaJanuwari noSepthemba kufinyelela kwizigidi eziyizinkulungwane zamaRandi ama-950
Eminyakeni eyisithupha edlule, izwe laseChina laqala ukusebenzisa uhlelo olubizwa ngeGeneration Road noma i-1 Generation 1 Road Project luyaqhubeka nokukhulisa ukuhweba phakathi kwamazwe. Ukuhweba kwalonyaka phakathi kwe1 namadola ama-trillion phakathi kwamazwe avumile ukubamba iqhaza kunethiwekhi yezohwebo kusuka eChina kuye eYurophu futhi uhulumeni waseBeijing wasondela.
ISIVUMELWANO SESIVUMELWANO SE197
Abaphathi baseChina basayine isivumelwano sokusebenzisana se30 Generation Road nezwe le-137 enhlanganweni yezizwe i197 phakathi no-Okthoba. Kumenyezelwe ukuthi ukuhweba kweChina namazwe eGenerations Road phakathi kukaJanuwari noSepthemba sekufinyelele kuma-950 billion amadola. Kuyaziwa ukuthi izwe selamukele iGeneration Road Project phakathi kwe65 ne70 kuze kube manje.
I-20 THOUSAND TRAIN TIMES
Isitatimende sokuphathwa kweChina ngaphakathi kohlaka lomgwaqo wesitimela i-Road Belt China Laos, umugqa wesitimela waseChina Thailand, iJakarta Bandung ngesitimela esinejubane kanye neGwadar Port ePakistan nasePiraeus Port eGreece baqhubeke nokusebenza ngempumelelo. Ngokwesitatimende, ngaphakathi kwesibalo seBelt Road Project, kuthiwa uma kuphela unyaka ka-Okthoba, imisebenzi ecishe ibe yinkulungwane ye-20 yezitimela ezenziwa phakathi kweChina neYurophu.
umthombo: Çinhab kuyinto
ICroatia, ene-Spanish Railway Enterprise ADIF…
I-DESA Isivumelwano Sokuthengiswa Nezinsizakalo Ezibhalisiwe nge-R2P
I-DESA Isayine isivumelwano sokumela ne-Comatreleco
I-DESA Isivumelwano Sokumela Esibhalisiwe ne-Gimota AG
I-BTSO ne-Adana Chamber of Cooperation Strategication Yezimboni…
I-BTSO ne-Sakarya TSO I-Sign Strategic Cooperation Protocol
Izitimela zaseKazakhstan ngeTCDD zokuhamba…
Ukubambisana Kwesitimela Enhlanganweni Yezokubambisana Kwezomnotho
Ukubolekwa kwezigidi ze-120 Million Euro kweMoto ye-IMM 137,5 Metro…
Indlela yeBelt and Road Initiative 'Win-Win'
I-Oneeration A Road Project Çinli